MacOS Big Sur waa halkan, M1s cusub iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
MacOS Big Sur waa halkan, M1s cusub iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkan shaki la’aan wuxuu usbuuc u ahaa isticmaaleyaasha Mac-da iyo weliba kuwa sugayay imaatinka cusub ee iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini iyo HomePod mini. Muddo 5 maalmood gudahood ah ayaan aragnay daah-furka cusub MacBook Air, 13-inch MacBook Pro, iyo Mac mini Iyadoo la adeegsanayo processor-rada cusub ee Apple ee loo yaqaan 'M1', waxaan sidoo kale awood u yeelannay inaan ku rakibno macOS-ka cusub ee loo yaqaan 'Big Sur' nooca 'Mac-yada'.
Kan hore ma noqon karo wax kale oo aan ahayn soo bandhigida ah Macs cusub oo leh processor-rada Apple Silicon, M1. Xaaladdan oo kale nuxurka loo yaqaan «Hal shay oo dheeri ah» Waxay nooga tagtay dhadhan aad uwanaagsan afkeena tanna waxaa lagu xaqiijiyay tijaabooyinka xiga ee processor-rada cusub ee Apple.
Sida loo rakibo macOS 11 Big Sur oo xoqan Waa qodobkeenii toddobaadlaha ee aan shaki ku jirin. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa xulashooyinka kala duwan ee aad ku samayn karto rakibid nadiif ah oo ku saabsan Mac-gaaga. Wax waxtar u yeelan kara dad badan isticmaalayaasha doonaya inay ka bilaabaan xoqida kumbuyuutarkooda.
Imaatinka M1-da cusub waa isbeddel xag-jir ah oo ku yimid Apple Macs waana markii sannado badan la isticmaalayey Intel processor-ka, shirkadda Cupertino ay wax ka beddeleyso processor-radeeda kombiyuutaradiisa. Xaaladdan oo kale imaatinka hawlwadeenadan ayaa imanaya oo ay weheliso hagaajinta madax-bannaanida, waxtarka, isticmaalka tamarta iyo ka sarreeya dhammaan awoodda.
Ugu dambeyntiina, ma dooneyno inaan ku darno maqaalka ka hadlaya kooxaha soo socda ayaa macquul ah inay ku daraan M1 cusub waana taas sanadka soo socda macquul ahaan Mac badan ayaa lagu dari doonaa processor-ka cusub Apple iska leh. Waan arki doonaa waxa dhaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » MacOS Big Sur waa halkan, M1s cusub iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Codsiga Darkroom ee loogu talagalay macOS waa la cusbooneysiiyay si uu ula qabsado naqshadda cusub ee macOS Big Sur